Tue, Jun 19, 2018 | 17:57:49 NST
Total Views: 54.0 K
यो लेख म आफ्नो रहरले लेखेको हैन । मेरो निजी विचार र भावनालाई पोख्नको लागि पनि लेखेको होइन । उर्जा बचतको लागि एलएडी बल्ब खरिद गर्न लाग्दा आफूमाथि लागेको आरोपमाथि कुलमान घिसिङले स्पष्टिकरण दिने बखतमा उनका आँखामा टिलपिल भएको आँसुले यो लेख लेख्न बाध्य बनाएको छ । यसर्थ यो लेख मेरो थोरै विचार र धेरै कुलमानको आँसुले लेखिएको हो ।
दुःखको कुरा हो हाम्रो देशमा जुन सुकै तहमा पनि भ्रष्टहरु हावी छन् त्यो भन्दा दुःखको कुरा हो दुई चारजना जो सतचरित्रवान् र देशको लागि केही गर्ने व्यक्तिहरु छन् । तिनलाई हामीले चिन्न सक्दैनौँ चिनिहालेपनि उनीहरुलाई सम्मान गर्नूको साटो उल्टै अनेक बखडाहरु झिकेर नालायक घोषित गरिदिन्छौँ । उनीहरुभित्रको राष्टियता हाम्रै व्यवहारले शिथिल हुन्छ । अनि उनीहरुको दुर्दशा देखिरहेका अरु त्यस्तै गुण र नैतिक चेतना भएका व्यक्तिहरुले यो कुरा प्रष्ट बुझ्छन् कि यो देशमा देश र जनताको भलो सोचेर काम छैन टिक्न सकिदैन । देश अनुसारको भेष देखाउनै पर्छ ।
धेरै अघि नजाउँ केही समय अघि यूवा नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई पनि सत्ताबाट बाहिर निकाल्ने चेष्टा गरिएकै हो । उनले देश र जनताको लागि के नराम्रो काम गरेका थिए र ? डाक्टर गाविन्द केसी जस्ता मान्छेलाई पागलको दर्जा दिने देशका शासकहरुको गगन थापालाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्नुलाई के अस्वभाविक ठान्नु ? भूकम्प पीडितहरुको राहतमाथि राजनीति गर्नेहरुको भीडमा, वर्षाैदेखि देशलाई अन्धकारभित्रको बन्दी बनाएर आफूलाई राष्टसेवकको पगरी गुथाएर हिँड्नेहरुको बीचमा कुलमान जस्ता व्यक्तिहरु नालायक नै हुन् । केही दिन अघिकै सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोगलाई हेरे पुग्छ देशमा न्यायिक उच्चता र असल मान्छेको सम्मान कहाँ छ भन्ने कुरा ।
बिडम्बना सत्ता हात पार्नको लागि राजनैतिक क्षेत्रमा अरुलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनै पर्ने, मान्छे जति असल र लायक भएपनि त्यसको खुट्टा तान्ने, आफ्ना जे जति कर्तुत भएपनि पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्ने प्रवृत्ति त नैसर्गिक गुण भइसक्यो । यी भनेका राजनीति गर्ने व्यक्तिमा हुनै पर्ने न्युनतम योग्यता नै मान्नुपर्छ । त्यो द्वन्द्वलाई सामान्य ठानौँ ।
तर कुलमान जस्ता व्यक्ति जसले वर्षौंदेखि लोलसेडिङको मारमा परेको देश र धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका उधोगधन्दाहरुलाई प्राण दिने काम गरे । त्यो पनि ठूलो चुनौतिको सामना गरेर । नत्र देशमा लोडसेडिङको अन्त्य भयो भने जेनेरेटर र सोलारको व्यापार घट्छ भनेर देशमा जति सक्यो लोडसेडिङ भइराखेकै राम्रो मान्न्ने राष्टवादी पनि नदेखिएका होइनन् । ठाउँठाउँमा विद्युत प्रसारणमा अवरोध गर्ने काम पनि भएकै हुन् । लोडसेडिङ अन्त्य भएकोमा दुःख मान्ने राष्टवादीहरुको अनुहार पनि हामीले छर्लंग देखिसकेका छौँ ।
यस्तो अँध्याराका हिमायतीहरुको बीचमा उज्यालो नेपालको अभियान सुरु गरेर हिँडेका कुलमानलाई आज उर्जा बचतको लागि एलइडी बल्ब खरिदमा कमिसनको चलखेल भनेर भ्रामक प्रचार फैलाउन सक्ने हामी जो जति छौँ यो हाम्रो बौद्धिक दरिद्रताको पराकाष्ठा हो । सबैले आफ्नो बौद्धिक उचाईलाई नाप्ने बेला आएको छ । कुलमान घिसिंग देशको कुलमान नभएर यौटा उज्यालोको नाम हो । मान्छे अन्कन्टार अँध्यारोबाट एक्कासी उज्यालोमा जाँदा आँखा तिरमिराउँछ केही दृश्यहरु उसको लागि भ्रमपूर्ण हुन्छ हाज हामी पनि त्यही भ्रममा छौँ ।
अत्यन्त अँध्यारो ठाउँमा बलेको बत्तिलाई के भनेर चिन्न त्यही बत्तिको उज्यालोले छेक्छ कुलमान आज त्यही उज्यालोले छेकिएका बत्ति हुन् । कुलमानप्रति यस्तो अभियोगको समाचार लेख्न सक्ने हामी पत्रकार हामी कति सत्यको नजिक पुगेर लेख्न सक्ने हैसियत भएका पत्रकार हौँ सोच्ने समय आएको छ । सबैले मनन् गरौँ कि कुलमान कतै काम गर्दा कुनै त्रुटि देखिइहाल्यो भनेपनि उनले कुनै त्यस्तो नियत राखेर कुनै काम गरेपनि उनले गल्ती गरेर भन्ने लेख्ने वा बोल्ने हाम्रो हैसियत छैन् ।
उनी जस्ता व्यक्तिले त आफू कस्तो मान्छे हुँ भनेर यी नालायक मान्छेहरुको बीचमा आँसु झारेर आफूलाई निर्दाेष सावित गर्नुपरेको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ देशमा हसल मान्छे भएर केही गर्न कति सकस छ भन्ने कुरा । जसरी कुलमानले आफूप्रतिको आरोप प्रमाणित भए झुण्डिन वा देश छोड्न तयार छु भनेर बोल्न सकेका छन् त्यसै गरि विभिन्न समयमा विभिन्न भ्रष्टाचारको नाममा मुछिएका कुन व्यक्तिले यस्तो चुनौति दिन सकेको छ त्यो खबर कुन पत्रकारले कहाँ लेख्न पाएको छ ? छ र त्यो प्रमाणित भएपछि कतिले देश छोडेका छन् कति अझैपनि राष्ट्रसेवकको पगरी गुँथेर बसेका छन् तथ्य बाहिर निकाल्न सक्नुपर्छ ।
अन्तमा जे जतिले कुलमानलाई यस्तो आरोप लगाएका छन् ती सबैलाई कुलमानले माफ गरिदिउन् । उज्यालो अभियान सफल होस् । यसमा मैले नैतिक समर्थन बाहेक केही योगदान गर्न नसकूला तर कुलमानलाई लागेको आरोप यदि सत्य सावित भयो भने वा अनेक जालझेल गरी उनलाई असफल बनाएर देश छोड्न बाध्य बनाइयो भने म पनि एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले सार्वजनिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर देश छोड्ने छु ।